Welulele isikole isandla uVVO - Ilanga News
Home Izindaba Welulele isikole isandla uVVO
Welulele isikole isandla uVVO
UZIBOPHEZELE ngokwelula isandla axhase isikole sakwa P eMlazi uDkt Velaphi VVO Mkhize, owakhe eduze kwaso lesi sikole. Kusuka kwesokunxele usihlalo wesigungu sesikole uMnu Menzi Biyela, uthishanhloko wesikole uNkk Gugu Zuma kanye noDkt Velaphi VVO Mkhize.
WENZE okungajwayelekile umelaphi wendabuko ophinde abeyisazi kwezamasiko, uDkt Velaphi “VVO” Mkhize, ozibophezele ekutheni uzokwelula isandla, asize isikole esingumakhelwane womuzi wakhe kwaP, eMlazi, eMthethweni Primary School ngezinye zezidingo esingenawo amandla okuzifeza. UDkt Mkhize ube nomhlangano wokuqinisa amaxhama okuxhumana nalesi sikole izolo ngoLwesithathu. Uhlangane nothishanhloko wesikole, uNkk Gugu Zuma nosihlalo wesigungu esilawula isikole, uMnu Menzi Biyela. “Ngithe mangikhethe isikole sezingane ezincane ngoba ngikholwa wukuthi inkunzi isematholeni. Kuyisifiso sami ukuthi kube nento esizoyenza ezokhulisa izingane, sizifundise ngezamasiko nokuthi intombazane uma isakhula, kulindeleke ukuba iziphathe kanjani, kanjalo nomfana.
“Ngicele isikole ukuba singikhiphele uhlu lwezinto esifisa ukuxhaswa ngazo, ngizobe sengingenelela kulokho engizoba namandla okukwenza. Ngalokhu engikwenzayo, ngiphosela nabanye abelaphi bendabuko kanjalo nosomabhizinisi inselelo yokuba mabasondele ezikoleni ezisemiphakathini yethu, silule isandla, singagijimi ngezimoto ezibizayo kodwa izikole okufunda kuzona izingane zethu noma esafunda kuzona kazinawo amawindi nezicabha, into esingakwazi ukuyilungisa ngale kokuchitha imali eshisiwe,” kusho yena. Utshele ILANGA ukuthi uzimisele ngokuthi kuphele le nyanga kube sekukhona aseqalile ukukwenzela lesi sikole njengoba uthishanhloko emkhiphelile uhlu lwezinto eziseqhulwini ezidingeka esikoleni.
Uveze ukuthi le nto ubehlale eyibuka yenzeka ezikoleni zabamhlophe, kutholakale ukuthi isikole sinazo zonke izidingo futhi ezisezingeni eliphakeme kodwa kube kungesikahulumeni. Uveze ukuthi ufuna ukuwufaka lo moya kubantu abamnyama, bazisukumele izikole zezingane zabo, bazixhase, kuphele ukuthi kube yibona futhi abazigqekezayo, bacekele phansi impahla. UNkk Zuma uveze ukuthi lokhu okweziwe nguDkt Mkhize kubajabulise kakhulu. UMnu Biyela uthe lokhu okwenziwe nguDkt Mkhize kufana nokunyelwa yinyoni esandleni kubona.
Previous articleINKOSI ITHI IZOQHUBEKA EZINYATHELWENI ZIKAYISE
Next articleSigonyuluka ngombango waseNdlunkulu iSilo